लोभलाग्दो कृषि कर्म खुर्सानी बेचेर लखपति ! – Khabarhouse
लोभलाग्दो कृषि कर्म खुर्सानी बेचेर लखपति !
Khabar house | २० माघ २०७६, सोमबार ०७:१९ | Comments
दाङ : कृषि अनुदान पाउनकै लागी खेती किसानीमा हात हाल्ने पनि छन् । अनुदान आइहाल्यो भने पनि ठूला र पहुँचवाला किसानको हातमा मात्रै पुग्छ । तर, लमही नगरपालिका वडा नं. ८ गिधेनीया निवासी रुद्रनारायण चौधरीले अहिले सम्म सरकारी अनुदान लिएका छैनन् । उनले अनुदान बिनै कृषि कर्मबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् ।
७० कुन्टल अर्थात ७ हजार किलो खुर्सानी बिक्री गरेर दुई लाख ८० हजार आम्दानी गरेका रुद्रनारायण चौधरीको बारीबाट अझै यतीकै मात्रामा खुर्सानी बिक्री हुन बाँकी छ । थोकमा सरदर ४० रुपैयाँ किलो खुर्सानी बिक्रि भएको छ । बजारको कुनै समस्या छैन् । खेतबारीमै आएर व्यापारीले खुर्सानी किनेर लग्ने गरेका छन् । भारतीय खुर्सानीले बजार ओगटीरहेको समयमा नेपाली किसानले गरेको खुर्सानी खेतीले बजार राम्रो पाउने गरेको छ ।
लमही नगरपालिका वडा नं. ८ गिधेनिया निवासी चौधरीले दुई वर्ष अघिबाट व्यवसायिक रुपमा खुर्सानी खेती सुरु गरेका हुन् । गत वर्ष उनले बारीभरी खुर्सानी लगाएका थिए। जमिनमा प्लास्टिक राखेर(मल्चिङ्ग) प्रविधिबाट खेती शुरु गरेरपछि उत्पादन बढेको बता ए । ‘गत वर्ष त्यसै खेती गरे उत्पादन त भयो तर, खर्च बढी लाग्यो’उनले भने–‘अहिले नयाँ प्रविधिबाट खेती गरियो । उत्पादन बढ्यो ।
फाईदा पनि भयो ।’ रुद्र नारायणको दुई विगाह जमिन छ । यो जमिनलाई उनले व्यवासायिक खेतीको लागी प्रयोग गर्दै आएका छन् । खुर्सानी लगाउनु अघि उनले धान, गहुँ, मकैको खेती गर्थे । तर, अहिले बजारको मागको आधारमा खुर्सानी, काक्रो, करेला, गन्जी (तरुल) लगाउने गरेका छन् । ‘खेती किसानीबाट वर्षमा ८–१० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । पहिला चामल किनेर खानुपथ्र्याे । अहिले धान बिक्री गर्छौं’उनले भने–‘मेरा चार भाई छोरा छन् । विदेश जाने सोच कसैमा छैन् ।’
परिवारको परिश्रमबाट कृषि कर्म चलेको छ । जेठो छोरा कृष्ण चौधरीले बंगुर पालेका छन् । यो पेशाबाट उनी सन्तुष्ट छन् । माइलो र साईलो छोराले बोइ लर कुखुरा पालेका छन् । कान्छो छोरा पढ्दै छन् । ‘हाम्रो परि वारको सबै सदस्य खेती किसानीमा छौं । जसले गर्दा काम गर्न सजिलो भएको छ’रुद्रमणीले भने–‘गत वर्ष खुर्सानी लगाउन केही मान्छे मजदुरी लगाउनु पर्‍यो । तर, अहिले नयाँ प्रविधिबाट काम गर्दा ज्यालादारी मान्छे खोज्नु परेन ।’